Ndị ọkachamara na Semalt na-ekpughe Usoro Mgbasa Ozi Nlekọta Iji Nweta Supoji gị SEO
Ịntanetị ji nwayọọ nwayọọ dochie usoro omenala ndị ọzọ na-eme n'oge a. Dịka ọmụmaatụ, webmasters nwere ike ịme usoro ahịa ha site n'iji ụfọdụ ngwaọrụ SEO dịka Google Analytics. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịkwado ahịa ahịa iji nweta ndị ahịa ha. Ụzọ ndị a na-agbalị ime ka ọnụnọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị, ika ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke mmemme mmemme weebụ dịka ịmepụta ịntanetị. E nwekwara ikpe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ ghara imebi usoro mgbasa ozi Social Media Marketing (SMM) n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe ha na-edebe weebụsaịtị ha.
Ụfọdụ ụzọ SEO sitere na nke webmasters na-ewu ụlọ ọrụ e-azụmahịa na-aga nke ọma dị na nduzi a nke Nik Chaykovskiy nyere, Onye Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta Semalt :
Mee ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị
Ọchịchị mgbasaozi mgbasa ozi na-eto eto na ọnụ ọgụgụ ndị Fans. Ndị mmadụ na-enwekarị ntụkwasị obi na akaụntụ weebụ nke nwere ọtụtụ ụmụazụ karịa otu na ole na ole - wifi точка доступа usb. Ikwesiri iji usoro ahia ahia biara iji duru otutu ndi na esoro gi na akaụntụ gi. Ọ dịkwa mkpa ka ị nọgide na-enwe mmekọrịta chiri anya nye ndị ahịa dị iche iche bụ ndị na-esote akụkụ ndị dị mkpa nke ịmepụta ọrụ ahịa zuru ezu n'ịntanetị. I nwekwara ike nwee ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ wezuo ndị na-eso ụzọ ọhụrụ site na listi ezigbo onye na-eso ụzọ site n'ịgba ume na-ekere òkè. Enwere otutu ihe eji emeputa aka SEO nke nwere ike inyere onye obula aka iwelie onu ogugu ndi na akwado ya n'oru oru..
Njikọ dị na mpụga na inbound dị mma
Nchịkọta mgbasa ozi ọha na eze na-etolite isi iyi siri ike nke backlinks siri ike. E nwere otutu ikpe nke ndị ọrụ na-enweta ọtụtụ njikọ na-abata iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ mụbaa ogo ya. Backlinks nke si na mmadụ mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ na-agụ dị ka mma backlinks. Ndị ọrụ na-erite uru site na ndị a backlinks na-eme ka ọtụtụ ndị ọbịa na saịtị ha. Njikọ azụ mpụga na-ebu ha na mmiri njikọ, nke kwesịrị ekwesị maka iji ya mee ihe n'ụzọ ndị mmadụ na-erite site na backlinks. E nwekwara ụzọ ndị ọzọ nke njikọ ndị a nwere ike ibu ihe njikọ njikọ na-eme ka ikike nke ngalaba gị nụ.
Gbaa mbọ kwadoro
Ị nwere ike imetụta mkpebi nke ụmụazụ gị ugbu a iji kesaa ọdịnaya. Ịkwesịrị ịdekọ ọdịnaya nke ọrụ ọrụ nke ịkekọrịta. Ọdịnaya na-abịa na ụdị nke ndị mmadụ na-eji arụ ọrụ ahịa dị mkpa. Ndị mmadụ na-ejikwa echiche okike na-eche banyere ebe nkè gị. O nwekwara ike ime ka ndị mmadụ na-ekere òkè na mgbasaozi mgbasa ozi site n'inwe ya mmekọrịta. Otu ụzọ e si kee ndị na-ege ntị bụ site n'ịgba asọmpi. Mkpesa, ebe onye mmeri na-eburu onwe ya, nwere ike ime ka oge aka gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Mkpọpụta weebụ dịgasị iche iche nwere ụzọ dịgasị iche iche nke na-enyere ndị mmadụ aka ịntanetị na mgbasa ozi dịgasị iche. Ndị isi ụlọ ọrụ nwere ọganihu nwere ọtụtụ ebe eCommerce na-arụ ọrụ dị iche iche n'akụkụ ụwa dum. N'ọnọdụ ndị ọzọ, SMM na nkà na ụzụ ndị ọzọ nke ịntanetị na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ nweta ndị ọbịa bụ ndị mesịrị ghọọ ndị ahịa. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ị nwere ike isi mee mkpọsa SMM ọganihu dịka Twitter dị na ntụziaka a. Ị nwere ike ịmepụta ma kpochapụ otu ebe nrụọrụ weebụ ịmepụta ihe na-aga nke ọma na ntanetị ndị ọzọ na-eme nke ọma n'ịntanetị.